Farmaajo iyo Afwerki oo "isafgarad" ku gaarey magaaladda Asmara
Farmaajo iyo Afwerki oo "is-afgarad" ku gaarey magaaladda Asmara
Madaxweyneyaasha Soomaaliya iyo Eritrea ayaa wada-hadalo laba maalmood qaatay yeeshay.
MUQDISHO, Soomaaliya - Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed ayaa booqday dalka Ereteriya muddadii u dhexaysay 10-ka ilaa 11-ka bisha Jannaayo ee 2020, kaddib martiqaad rasmi ah oo uu ka helay Mudane Isaias Afwerki.
Hogaamiyeyaasha ayaa 13-kii Febraayo shir saddex-geesood ah ku yeeshay magaalada Addis Ababa.
Farmaajo oo xilka ka qaaday Gudoomiyihii Maxkamadda Sare [Akhri Sababta]
War Saxaafaded 27.05.2018. 16:20
Farmaajo oo ka tacsiyeeyay geerida Janaraal Cabdirisaaq Khaliif Cilmi
War Saxaafaded 29.01.2020. 15:20